Posted by JuneOne at 7:52 AM4comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ လယ်တုန်းက သူငယ်ချင်း ကဖုံးဆက်တယ် မြန်မာသံရုံးမှာ မြန်မာကျောင်း အအပ်ခံနေပြီ
အပ်မလားတဲ့။သူ့သမီးလေးနဲ့ အက်ဝင် နဲ့ကရွယ်တူဆိုတော့ အတူတူ အပ်ရအောင်ပေါ့။ဒါနဲ့ သူ့ပါပါး
ကိုမေးတော့ အေးလေ ပိုပိုလိုလို အပ်ထားတာပေါ့ ဆိုပြီး သွားအပ်တယ်။အားပါးပါး လူတွေမှ အများကြီး
၉ နာရီလောက်က တန်းစီတာ ၁ နာရီလောက်မှ ပြီးတယ်။မေလင်းလင်း ဆို ပြန်မယ်ချည်းပြောနေတာ။
အရင်တုန်းက အခွန်ဆောင်ရင် တန်းစီသလိုပဲ။ ဇွန် ၁ မှာ ၅ နှစ်ပြည့်တဲ့ ကလေးတွေ အပ်လို့ရတယ်။
နောက်ကို ၂ ပတ်ပဲ နောက်ကျတာ လက်ခံတယ်။ဥပမာ ဇွန်၁၅ ရက်မွေးတဲ့ ကလေးအထိပဲ လက်ခံတယ်။
july မှ ၅ နှစ် ပြည့် ဆို မရဘူး။အမှန်က အက်ဝင် က ၆ နှစ် ပြည့်နေပြီ မြန်မာမှာဆို ပထမတန်းပေါ့။
ဒါပေမယ့် မနှစ်က သူငယ်တန်း မအပ်မိတော့ သူငယ်တန်းအောင်လက်မှတ်က မရှိဘူး။အဲ့တော့ကာ
သူငယ်တန်းပဲအပ်ခဲ့ရတယ်။မအပ်ခင်မှာ အတော်လေး အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။အရင်အပ်တဲ့သူတွေက
reregistration fees USD 50 ကို သံရုံးက ၅၀ တန်မှ လက်ခံတ်ာတဲ့။၂၀ တန် ၂ရွက်နဲ့ ၁၀တန်
၁ ရွက် မရဘူးတဲ့။ဒါနဲ့ မသွားခင် ၅၀ တန် ရှာဖွေရေးလုပ်လိုက်တာ choa chu kang တစ်ခွင်money
changerွှကုန် ကုန် ဘယ်မှာ မှ မရဘူး။နောက်ဆုံးတော့ အေးလေ အခု တိုးတက်နေပြီဆိုတော့
အရင်လို အဲ့လို မရစ်လောက်တော့ပါဘု ဆိုပြီး ၂၀ တန် ၂ရွက် ၁၀ တန် ၁ရွက်လေးကိုင် ရင်တမမ
နဲ့သွားရတာပေါ့။ဟိုရောက်တော့ ရှေ့ကလူတွေ မေးကြည့်တော့ ပြောင်းသွားပြီးတဲ့။နက်မောက်လမ်းမှာ
စုံစမ်း(မြန်မာပြည်ဖက်က) စာရင်း ထွက်မှ METB မှငွေသွင်းတဲ့(ပိုပြီး ရှုပ်လေသည်)
ရန်ကုန်မှာလူမရှိတဲ့ တို့တွေအတွက်တော့ မလွယ်ဘူး။အဲ့အတွက် သယ်ငယ်ချင်းကိုပဲ အကူအညီတောင်း
ရတယ်။july လကုန်မှ သွားစုံစမ်းရမယ်ဆိုလို့ သယ်ရင်း အဖေ သွားစုံစမ်းတော့ နာမည်တွေတော့ရောက်
နေပြီ စာမထုတ်ပေးဘူး။နောက် တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ MFTB မှာ ငွေသွားသွင်းပါတဲ့။အဓိက ဒီကျောင်း
အပ်တာကလဲ စာမေးပွဲပဲဖြေရတာပါ စာတွေက ကွကိုယ်သင်ရတာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထားလိုက်ရင် သူ့ကို
မြန်မာစာ ပိုသင်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီးထားလိုက်တာပဲ။မြန်မာဆိုတော့ မြန်မာစာ အရေးအတ်တော့ ကောင်း
ကောင်းတတ်ရမှာပေါ့။ဘာသာ စကား တစ်ခုကို အရေးအဖတ် ပိုတတ်ထားတာ မမှားဘူးပေါ့။ပြောတာက
တတ်ဖို့ လွယ်တယ် ဖတ်တာ ရေးတာ ကခက်တယ်။ကြီးသွားရင် သင်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
စိတ်ထဲမှာ သူငယ်တန်းကို မြန်မာ၊အင်္ဂလိပ်စာ၊သင်္ချာ သုံးဘာသာပဲ ရှိတယ်ထင်နေတာ။သဘာဝ သိပ္ပံဆို
တာရှိသေးတယ်ဆိုလို့ မြန်မာပြည်ကို သူငယ်တန်းစာအုပ် တစ်စုံလှမ်းမှာလိုက်တော့ ဟိုက လေးအုပ်
ပို့တယ် သဘာဝ သိပ္ပံ ပါ အပါဝင်ပေါ့။ဟော သံရုံးက အခု စာထွက်တော့ ၆ ဘာသာတောင်။ကျန်တဲ့
၂ဘာသာ ဘယ်မှာသွားရှာရမလဲမသိဘူး လူကြုံလဲ ကုန်ပြီ။
Posted by JuneOne at 5:19 PM5comments Links to this post
ကလေးတွေ အကြောင်း ၈
Mommy I want to eat banana.ဟယ် အိပ်တော့မယ်လေ စားအုံးမလို့လား။Yes,today I playedalot
and forgot to eat banana.Then I never eat banana for Today.အဲ့ဒါဆို မမ(ကလေးထိန်း)ဆီသွား
တောင်းလိုက်။သူ အခန်းပြင်ထွက်သွားတယ်။မမ banana စားမယ် လိုပပြောသံကြားတယ် ဟိုက မီးမီး
ဖို့ တစ်လုံး ကိုကိုး ဖို့ တစ်လုံး ဆိုပြီးပေးတာကို ကိုကိုး,သူမကြိုက်ဘူးလေ ဆိုပြီးယူမလာဘူး။အခန်းထဲ
ရောက်တော့ အဲ့အသံတွေကြားနေတဲ့ အဖေလုပ်သူက ဘာလို့ ကိုကိုး ဖို.ယူမလာတာလဲသမီးဆိုတော့
Because he dont like banana တဲ့။အကိုလုပ်သူက I want to eat ဆိုတော့ ပြန်ထွက်သွားတယ်။
မမ banana ပေးအုံး ကိုကိုးပြောတယ် သူ စားမယ်တဲ့။မေလင်းလင်းက အခု အဲ့လိုကလေး အဖေ အမေ
အကို ကိုတွေ့၇င် အီး လိုပြောတယ် သူ့မမ ကိုဆို မြန်မာလို။
သားအမိတွေ ညဖက် အိပ်ယာဝင်တော့ သူ့ ကုလားအုပ် အရုပ်လေးကိုရှာတယ်။မတွေ့တော့ mommy,I
cant find my giraffe anywhere?ဆိုပြီး ရှာတယ်။တွေ့တော့ အိပ်ဖို့လုပ်တယ်။အမေလုပ်သူက ပန်းရောင်
စောင်တစ်ထည်ယူပြီး ခြုံပေးလိုက်တယ်။စောင်က နဲနဲ နံနေတော့ စောင်တွေ နံနေပြီ လျော်ရအုံးမယ် ပြော
မိတယ်။မချောက Okay mommy,Tomorrow morning I will ask ma ma "ma ma,Can you help
to wash this pink blanket ,please".အမေလုပ်သူ စိတ်ထဲကနေ အမလေးဟဲ့ သူ့လဲ ဘာမှမပြောပဲ
လုပ်ပြန်ပီ မေလင်းလင်းတို့ကတော့လို့မှတ်တယ်။သူက ဆက်ပြောသေးတယ် mommy,tomorrow I
will not play first when I wake up.If not,I will forgot to tell ma ma to wash blanket.တဲ့။
မနက်ရောက်တော့ ကိုယ်လဲ အလုပ်သွား ညနေ အလုပ်က ပြန်လာ အဲ့ကိစ္စမေ့တောင်နေတယ်။ည အိပ်ရာ
၀င်တော့ သူက mummy I asked ma ma to wash pink blanket တဲ့။အဲ့တော့မှဟယ် ဟုတ်ပါလား
အပြင်မှာစောင်တစ်ထည်လှမ်းထားတာ တွေ့မိတယ် အမှတ်မဲ့ဆိုတော့ သတိမထားမိဘူး။ချက်ချင်းပဲု အခန်း
ပြင်ထွက်ပြီး မမ ရေ မမကို မေလင်းလင်း စောင်လျော်ခိုင်းလို့လားဆိုတော့ ဟုတ်တယ်အမ မေလင်းလင်း
အိပ်ရာက နိုးနိုးချင်းအဲ့စောင်ကြီး ညီမ အခန်းဆီသယ်လာပြီး မမ မာမီကဒီစောင် လျော် မယ်တဲ့ ဆိုပြီး
လာပေးတယ်။မီးလေး ဘာတွေပေသွားလို့လဲဆိုတော့ နံနေလို့တဲ့။တော်ကို အံ့သြသွားတယ်။သူ့ကို
တကယ်လျော်ခိုင်းမယ်ထင်မမထားဘူး။အဲ့ဒါကတော့ ကျမတို့ ၄ နှစ်သမီးမေလင်းလင်းပါရှင်။
(အက်ဝင်ဆို စောင်နံရင်လျော်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူး။သိရင်တောင် ဘယ်သူ့ကို လျော်ခိုင်းသင့်တယ်
Posted by JuneOne at 7:25 AM2comments Links to this post
ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက အက်ဝင်တစ်ယောက် တရုတ်စာကျူရှင်က ပြန်လာတော့ အမေလုပ်သူကို သူ့အောက်
သွားတစ်ချောင်း နဲ့နေတာပြတယ်။သွားကအတော်ကို နဲ့နေပြီ သူကလဲ သွားနဲ့နေတော့ မနေတတ်ဘူး။
ညကလဲ ၁၀နာရီကျော်နေပြီ ဘယ်သွားဆေးခန်းမှ မဖွင့်တာ့ဘူး။ဖွင့်လဲ အတော်များများက appointment
နဲ့သွားရတာဆိုတော့မလွယ်။NUH မှာလဲ Check up လုပ်ထားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး။အမေလုပ်သူမှာ
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး အဖေလုပ်သူကလဲ ပြန်မလားသေး။သွားနှုတ်တဲ့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ လင်ညီအမကို
လှမ်းမေးတော့ အရမ်းနဲ့နေရင် တစ်ရှုးလေးနဲ့ ကိုင်ပြီးဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့ ဒါမှမဟုတ်ရင် အပ်ချည်ကြိုးကို
၂ ကွင်းထပ်လုပ် စွပ်ပြီးဆွဲနှုတ်လိုက်တဲ့ ကိုယ့်မှာကြားတာနဲ့တင် အသည်းယားနေပြီ မလုပ်ရဲဘူး
မလုပ်ရဲတာထက် ကိုယ်လုပ်လိုက်မှ သွားက မကျွတ်ပဲ တန်းလန်းဖြစ်နေရင် အက်ဝင်ပိုနာမှာလေ။သူကလဲ
မာမီ မာမီ ဆိုပြီး မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီး လျှာနဲ့ထိုးနေရော အဲံဒါနဲ့ ကဲ try ကြည့်မယ်လေဆိုပြီး တုန်တုန်
တုန်နဲ့အပ်ချည်ကြိုးကို သူ့သွားမှာ ချည် တင်းနေအောင် ဆွဲပြီး အပေါ်မလိုက်တာ အက်ဝင် အားခနဲ
တစ်ချက်အောပြီး သွားက ဂလောက်ခနဲ အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်။အောင်းမလေး အဲ့ကျမှပဲသက်ပြင်း
ချနိုင်တယ်။သွားကလဲ အရမ်းနဲ့နေလို့ပေါ့။သူများတွေအတွက်တော့ လွယ်၇င်လွယ်မယ်။ကိုယ့်အတွက်တော့
ပထမဆုံးဆိုတော့ သဲထိတ်ရင်ဖိုပဲ။ကိုယ်ငယ်ငယ်ကတော့ အဖေနှုတ်ပေးတာကိုး။သွေးတော့ သိပ်မထွက်
Posted by JuneOne at 4:27 PM0comments Links to this post
အက်ဝင် နှင့် မေ
သားလေးတစ်ယောက် သမီးလေးတစ်ယောက်ဆိုတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်ကလေး မွေးထားတာပေါ့။မောင်နှစ်မ
ပေမယ့် အတော်များများ ဆန့်ကျင်ဖက် အက်ဝင်က အပူဆို နဲနဲနွေးရင်တောင် အော်နေတာ မေကတော့
အနွေးကြိုက် အအေးလုံးဝ မကြိုက်။မေက ကြာဇံကြိုက်တယ် ပေါင်မုန့်မကြိုက်။အက်ဝင်က ပေါင်မုန့်ကြိုက်
ပြီး ကြာဇံဆို နှာခေါင်းရှုံ့သူ။အက်ဝင်က အချိုကြိုက် မေက အချဉ်ကြိုက်သူ။
မေက ကျောင်းသွားရတာကို ပျော်သူ အက်ဝင်က ကျောင်းမသွားပဲ အိမ်မှာနေရတာကိုပျော်သူ အပြင်မထွက်
ချင်သူ။ကစားကွင်းနဲ့စာကြည့်တိုက် တစ်ခုပဲသွားရမယ်ဆို အက်ဝင်က စာကြည့်တိုက်ရွေးပြီး မေကတော့
ကစားကွင်းက တစ်ပြားမှမလျော့။မေက ဖရဲသီး၊သဘောင်္သီး၊ငှက်ပျောသီး ကြိုက်ပြီး အက်ဝင်က အဲ့ဒါတွေ
ကျွေးရင် မျက်ခုံးရှုံ့သူ။မေက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးချင်သူဖြစ်ပီး အက်ဝင်ကတော့ သူများအားလေးကို မှီလို့
ရရင်မှီချင်သူ။စာမှာကျတော့ အက်ဝင်က မေ့ထက်ပို စိတ်ဝင်စားသူ။ကစားတဲ့ နေရာမှာတော့ မေက
ကျွမ်းကျင်အရာရှိ။လူမှုရေးမှာတော့ မေဟာ အက်ဝင့်ထက် ကျွမ်းကျင်သူ။အော် ဘာလိုလိုနဲ့ မေတောင်
၄ နှစ်ပြည့်ပြီး အက်ဝင်တောင် ဇွန် ၁ ဆို ၆ နှစ်ပြည့်တော့မယ်။
Posted by JuneOne at 1:14 PM3comments Links to this post
Labels: edwin, May
အမေလုပ်သူ အလုပ်ပြန်လုပ်မယ်စီစဉ်တာမလို့ ကလေးထိန်းခေါ်တယ်။ကလေးထိန်းမလာခင် ညက
အက်ဝင့် အိပ်ယာထဲမှာ အက်ဝင် မာမီ အလုပ်သွားလုပ်ရင် မမ တစ်ယောက်ခေါ်ထားမယ်။အဲ့မမက
အက်ဝင်တို့ကို ကျောင်းလိုက်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။မာမီ စောစောပြန်လာမယ်။မမနဲ့လိမ်လိမ်မာမာနေနော်။
လို့ပြောတော့ ခေါင်းညိတ်တယ်။ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ သူနားလည်ပါ့မလား ထင်နေတယ်။နောက်နေ့လေဆိပ်
မှာ အဲ့ကလေးမလေးကို သွားကြိုတော့ သူကမေးတယ်"mommy,ma ma can speak only myanmar?
တဲ့။မမ လို့သူ့ကိုပြောတဲ့ အတွက် မြန်မာဆိုတာ သူနားလည်ပုံရတယ်။ဟုတ်တယ် သား မြန်မာလိုပဲတတ်
တာ ဘာဖြစ်လို့လဲ။If I want to play playdough,how to say in myanmar? တဲ့။မြန်မာပြည်မှာတော့
ဆော့တဲ့ ဂျူံ့လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။မမ ဂျုံဆော့မယ်ပေါ့ ပြောလေသား။Ok ,so I can say မမဂျုံဆော့
မယ်ပေါ့။If I want pass urine,I must say ရှုးရှုးပေါက်မယ်လား မာမီ။If i want to wear sock,ခြေစွပ်
စွပ်မယ် ပေါ့နော် မာမီ။အေးဟုတ်တယ်။If I take shower,I should say ရေချိုးမယ်ပေါ့နော်။မြန်မာလို
ဘယ်လို ပြောရတယ်ဆိုတာ အမေ လုပ်သူဆီမှာ သေချာအောင်မေးနေတာ။အော် ကိုယ်ပြောတာသူနား
မလည်ဘူးထင်နေတာ သူသိသားပဲ။သိလို့ ဘယ်လို ဆက်ဆံရမယ်ဆိုတာတောင် ကြိုမေးလိုက်သေး။
အခု အဲ့ကလေးမ ရောက်ကတည်းက အမေလုပ်သူက တစ်ခုခုပြောလိုက်ရငါ အရင်လို Yes,mommy
မပြောတော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ မေမေ တဲ့။
Posted by JuneOne at 7:46 PM2comments Links to this post
အိမ်မှာတော့ မေဟာ စတားပဲ။အငယ်လဲဖြစ် မိန်ကလေးလဲ ဖြစ် သွက်လဲသွက်တယ်လေ။အက်ဝင်ကတော့
ခပ်အေးအေးသမားပဲ မေ့ကို နမ်းလို့မကလို ဖက်နေနေ ချစ်တယ်လို့ပြောပြော ဘယ်လိုမှမနေဘူး။မေလင်း
ကတော့ အကိုလုပ်သူကို အင်္ကျီလေး ၀တ်ပေးတာ အကိုလုပ်သူကို သားလေး ခေါ်တာ နမ်းတာ ချစ်တယ်
ပြောရင် ဘေးနားကနေ မျက်နှာ ပုပ်ကြီးနဲ့ How about may lin lin ဆိုပြီး အတင်လာမေးတော့တာ။
အကိုလုပ်သူကို နမ်းရင်လဲ မကြိုက်ဘူး အတင်းသူ့ပါးလာထိုးပေးတာပဲ။မေ့မှာ အကျင့်ကောင်းလေးတွေ
က ဘာမဆို သူ့အားသူကို ချင်တာပဲ။ဘာမဆို I can do myself ပဲ။ကျောင်းသွားချိန် မထသေးရင်
လင်း ကျောင်းမတတ်တော့ဘူးလား ဆိုတာနဲ့ အတင်းကုန်းထတာပဲ။စနေ၊တနင်္ဂနွေတောင် ကျောငိး
တက် ချင်နေသေးတာ။ကျောင်းမှာ အင်္ဂါ နေ့ဆို gym ရှိတယ်လေ။သူ သိပ်ပျော်ပေါ့။အဲ့နေ့ မရောက်ခင်
တနင်္လာနေ့ ကတည်းက မာမီ I want to go to exercise room.Can I say to teacher "I want to
go exercise room"တဲ့။သူက ဖော်ရွှေတယ်။အပေါင်းအသင်းမင်တယ်။ဒါပေမယ့် တစ်ခါ တစ်လေ
ဂျစ်ကန်ကန်။ဆင်ခြေ၊ဆင်လက် ကလဲ များသေးတယ်။ဟိုတလောက သယ်ရင်းကလေးတွေ လာလည်လို့
ဆော့တယ် ပြန်သွားတော့ အမေလုပ်သူက သူ့ကို အရုပ်တွေပြန်သိမ်းခိုင်တာ ဘာပြောတယ်မှတ်လဲ
ကျယ်ကျဲ ဆော့သွားတာတဲ့။သူဆော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။သူမဆော့လို့ မသိမ်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘော။
မေဟာ အမေလုပ်သူကို သိပ်တွယ်တာ။တစ်ခါတစ်လေ သူနဲ့ကိုယ် ၂ယောက်ထဲ ဆို အမေလုပ်သူကိုလာ
ပြီး ပါကလေးဖျစ်လိုက် လာနမ်းလိုက် ဆံပင်လေးတွေ လာသပ်တင်လိုက်နဲ့ လာလာပြီး လူကို ကြွေအောင်
အက်ဝင်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ အမေလုပ်သူက နမ်းရင်တောင် မာမား ဘာလို့နမ်းတာလဲ ဆိုတာမျိုး။
အက်ဝင်တစ်ယောက် အခုတစ်လော တရုပ် လိုသိပ်ပြောချင်တယ် မာမီ မခေါ်တော့ဘူး။မာမားတဲ့ တော်။
တရုပ်လိုတွေလဲ အင်္ဂလိပ်ကြားညှပ်ရဲ့။ဒီကြားထဲ မြန်မာလိုကလဲ ညှပ်သေး။ကစားကွင်းမှာ မြန်မာတွေ တွေ့
ရင် မြန်မာလိုပြောချင်တယ်။ဖုန်းထဲမှာ တရုပ်လို ရေးပြီး အင်္ဂလိပ်လို ပြန်တဲ့ application မှာ မြန်လိုရေးချင်
လို့တဲ့ သူလိုက်ရှာသေးတယ်။သူက မြန်မာလိုရေပြီး အင်္ဂလိပ်ကိုပြန်ချင်တာ။အက်ဝင်ဟာ ဘယ်အရာမဆို
သင်လွယ်တယ် မကောင်းဘူးလို့ ပြောထားတဲ့ဟာဆိုလဲ မကောင်းဘူးဆိုပြီး အပီ မှတ်ထားတာပဲ။သူ့ညီမ
ဒါပေမယ့် အကြီးမလို့လားမသိဘူး ကိုယ့်ကိုယ် မလုပ်ချင်ဘူး အရာရာတိုင်း အမေအားကိုးချင်တယ်။ဥပမာ
သွားတိုက်ဆေး ညှစ်တာလေးကအစ။အမေ လုပ်သူက သားဖာ့သာ သားလုပ်ဆိုတော့ ကြိုးစားပြီး ညှစ်
တယ် မထွက်ဘူး။ညီမလုပ်သူက ရေချိုးခန်း အ၀ သွားပြီး ကိုကိုး ဒီလိုညှစ်လေ ဒီလိုဆိုပြီး လက်နဲ့ညှစ်တဲ့
ပုံစံလုပ်ပြတယ်။အကိုလုပ်သူက ညီမ လုပ်သူဆီ လှမ်းပေးတယ်။ညီး မလုပ်သူက ဘာပြောတယ်ထင်လဲ။
No ko ko, you must do yourself တဲ့။သူက ညှစ်တတ်လို့ သွားတောင် တိုက်ပြီးပီလေ အကိုလုပ်သူက
ညှစ်မရသေးဘူးလေ။မေလင်းလင်း အမေ လေသံကို လိုက်တာ။ခွေးမလေး.............
အဲ သူ စိတ်ပြေရင် မာမီ အက်ဝင် စိတ်ကောက်တော့ဘူးလို့ စိတ်ကောက်ပြီးပီလို့ တရားဝင်ကြေငြာတယ်။
အခုတလော သူ့ရဲ့ ဆိုက်ကိုက သူ့ ဥဥ(သူ့အပြော)/ရွှေပန်းကို ဘယ်နည်းနဲ့မဆို ထိတာ မကြိုက်ဘူး။
တစ်ရက် အမေလုပ်သူက အင်္ကျီ လဲပေးရင် လက်နဲ့ မတော်တစ်ဆ ထိမိသွာားတာကို စိတ်ကောက်လိုက်
တာ မပြီးတော့ဘူး။အခုနောက်ပိုင်း သူ့ကို အ၀တ်လဲပေးရင် သူ့ဥဥကို လက်နဲ့ဖုံးထားတယ်။အမေလုပ်သူ
အခုတစ်လောကျောင်းမှာ healthy foods တွေ အကြောင်းသင်တော့ Vege လုံးဝ မစားတဲ့သူက အခု
အရွက်တော်တော် များများ စားလာတာ ၀မ်းသာစရာပဲ။
(နောက် အချိန်ရရင် ဆက်ရေးအုံးမယ်)
Posted by JuneOne at 1:19 AM3comments Links to this post
ဒါ facebook မှာတင်ဖူးတာ Blog မှာပြန်တင်တာ
November 3, 2013 at 1:21am
အက်ဝင် ဟာ စကားပြောနောက်ကျတယ်။၂ နှစ်မှာ A-Z ကို ကောင်းကောင်းဖတ်နိုင်ပေမယ့် စကား သိပ်မပြောဘူး။ပါပါး မာမားတော့ ခေါ်တယ်။ယောက္ခမ ကပြောတယ် ပါပါး မာမားလဲ ခေါ်တယ် စာလဲ ဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ အ အတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ယောက္ခမလဲ စကားပြောအောင် ကြက်ဖင်ဆီဘူးတွေလဲ ကြော်ကျွေးတာပဲ မထူးခြားဘူး။အဲ့ အချိန်တုန်းက မေလင်းလင်း မွေးဖို့ပြန်နေချိန်။နောက် ကျတော့ ယောက္ခမက ပြောတယ် သက်ဦး စကားပြောနောက်ကျရင် စီးပွားကောင်းတယ်တဲ့ ဆိုပြီး လက်လျော့လိုက်တာ။
၂ နှစ်ခွဲလောက်ကျတော့ စပြောတယ်။အခုလဲ ကျရော ရေပက်မ၀င် နားကို ငြီးနေတာပဲ။ကလေးပဲ မလို့လားသိဘူး သူ့ တွေးခေါ်ပုံဟာ တစ်မျိုးပဲစာဆိုရင် သူရနေတဲ့ စာလုံးကို သူ့ကို ပိုသိအောင် ရေးခိုင်းတာတို့ ဖတ်ခိုင်းတာတို့ ဆိုရင် စိတ် မ၀င်စားဘူး အသစ် အသစ်ပဲ တတ်ချင်တယ်။ညအိပ်ခါနီးကျလို့ စာမလုပ်ပဲ အိပ်ယာဝင်ရင် သူ study time မလုပ်ရပဲ အိပ်ရလို့ရစ်သေးတာ။နဲနဲတော့ လုပ်လိုက်ရမှ။မြန်မာစာလဲ တော်တော် ဖတ်တတ်နေပြီ။တစ်ချို့ဟာတွေဆို အဓိပ္ပါယ် မသိပေမယ့် အသံထွက်မှန်အောင် ဖတ်နိုင်တယ်။ဟိုနေ့က အနားမှာရှိတဲ့ စာအုပ်ကိုတွေ့လို့ သူဖတ်လိုက်တာ..ခင်ခင်ထူး..ခမည်းကြိုးတဲ့...အသံထွက်က တန်းနေတာပဲ..
အခု တရုတ်စာကျူရှင် ကျောင်း ထားတယ်။ Term 1 တုန်းက နောက်ဆုံး အပတ်မှာ စာမေးပွဲပြန်စစ်တာ မသိတော့ ဒီအတိုင်းပဲ လွှတ်လိုတာ ၆၀ မှာ ၄၅ ရတယ်။Term2ကျတော့ စာမေးပွဲဖြေရမဲ့အချိန်မှာ တရုတ် ကဗျာ ဆိုရတယ်။၁ပုဒ် ၁၀ မှတ်။၄ ပုဒ်မှာ ကိုယ်ကြိုက်တာ ၁ပုဒ် ဆိုရတာ။အဲ့မှာ ကိုယ်တော်က ပလွတ် ပလွတ်ရတဲ့ အပုဒ်တွေ ပါရဲ့သားနဲ့ ထစ်နေတဲ့ အပုဒ်ကိုမှရွေးဆိုခဲ့တယ်။ကျန်တာတွေ အကုန်မှန် ကဗျာ ၁မှတ်လျော့ နဲ့ ၆၀ မှာ ၅၉ ရတယ်။T3 မှာ မြန်မာပြည်ပြန်နေလို့ မဖြေလိုက်ရဘူး။Term4အခု အပတ်ကျတော့ အမေ လုပ်သူက သားလေး ကဗျာကို ကိုယ်ရတာပဲ ဆိုနော်လို့မှာလိုက်တာကို အရင်အတိုင်းပဲ ၄ ပုဒ်ထဲမှာ ဒေါင်းဒေါင်းပြေးရတဲ့
အပုဒ်ကို မဆိုဘဲ ထစ်နေတဲ့ အပုဒ်ကို ဆိုခဲ့ အမေလုပ်သူက သား ဘြာဲဖစ်လို့ ရတဲ့ အပုဒ်တွေ မဆိုခဲ့တာလဲဆိုတော...........
မာမား edwin already good at the other three.I am not good at ရှောင်ဝှားမောင်းတဲ့။ရှောင်းဝှားမောင်းကို သူ ကောင်းကောင်း မရလို့ ဆိုခဲ့တာတဲ့။သူ့စိတ်ထဲမှာ အဲ့ဒါ ဆိုလို့ ထစ်နေရင် ဆရာမက ထောက်ပေးမယ်ထင်နေတာလား။သူ့ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း မရသေးတဲ့
အသစ်ကိုပဲ စိတ်ဝင်စားလို့လား မသိဘူး။အဲ့ အပုဒ်ကို သူ ထစ်နေလို့ ကိုယ့်မှာ ရှေ့အပတ်က သူ့ဆရာမကိုတောင် သူထစ်နေတဲံ နေရာ မေးပြီး မှတ်လိုက်ရသေးတာ ပြန်သာ မကျင့်ပေးဖြစ်တာ။အခြစ်ရေတာ ၁ပုဒ်မှား နဲ့ ကဗျာ ၁မှတ်လျော့ ၆၀ မှာ ၅၈ ပဲရခဲ့တယ်။ဒီအပတ်သူ့ကို သေချာ မလုပ်ပေးဖြစ်တာရယ် စာလုံးတွေက သံတူ ကြောင်းကွဲတွေများနေလို့ အဲ့လောက်တောင်ရမယ် မထင်ထားတာ အမှန်ပဲ။အဲ့လောက်ရတော့လဲ ဘာလို့ ဒီကဗျာ ဆိုခဲံတာလဲ။ဟို အခြစ်မှားတာလဲ မမှားသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ မပြောသာ ပြောသာ ပြောလိုက်သေးတယ်။
(စကားပြောနောက်ကျတဲ့ ကလေး အတိုးချပြောသလားမှတ်ရတယ် မျက်စိ နှစ်လုံး ပွင့်ကတည်းက အကြောင်းရာမျိုးစုံကို မနားမနေ မာမီ မာမီ ဆိုပီး ခေါ် ခေါ်ပြီးပြောလိုက်တာ ခေါင်းတောင်မူးတယ်။ပြောယုံတင်မကဘူး မေးခွန်းတွေကလဲ ပါသေးတယ်။စားလုံး တစ်လုံးရရင်တော့ တစ်နေကုန် အဲ့ အကြောင်းပဲ တစ်နေကုန်ပြောတော့တာပဲ။ဒီလပိုင်းတွေ ပိုဆိုးလာတယ်။ကစားကွင်းမှာ မြန်မာ အချို့ကိုတွေ့လို့ ရှိရင်လဲ ညေပးလာပြီးပြောသေးတယ် တအံ့တသြနဲ့ မာမား They know how to speak myanmar တဲ့။မနေ့ညက ခရီးသွားငါးယောက်ရဲ့ သီချင်းနားထောင်တော့ အဲ့ အထဲက ဘ၀ ဆိုတာကို နားထောင်မိတော့ ထူးဆန်းတယ်ထင်ပ မာမီ what mean of ဘ၀ ?တဲ့ အမေလုပ်သူ ဘယ်လောက်တော်လဲ ဘ၀ ဆိုတာ Life ကိုပြောတာပေါ့ သားရဲ့။ဆက်မေးတယ် so what is life...နဲနဲ ခေါင်းစားသွားတယ်။အင်း ဘ၀ ဆိုတာယ်ြလိုပြေရမလဲ From birth to death ပေါ့သားရယ် ပြီးစလွယ်ဖြေခဲ့တယ်။..အမေလုပ်ရတာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး ပြုစု ယုံတင်မက သူတို့ မေးတာတွေဖြေဖို့ GK ကလဲ ရှိရအုံးမှာပါလားလို့ အခုမှ သဘောပေါက်တယ်။(အက်ဝင်))
Posted by JuneOne at 12:29 AM 1 comments Links to this post
ဒီမနက် အိပ်က နိုးနိုးချင်း ဖုံးကို ကြည့်လိုက်တော့ Sing Tel က bill sms ပို့ထားတာတွေ့လို့ ဖတ်လိုက်
တာ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်။phone bill ဟာ ၂ ဆလောက် ကျနေတယ်။အလျင်အမြန် bill ကို ဒေါင်းပြီး
ဖတ်လိုက်တော့ အောက်က ဘာမှန်း မသိတာကြီး ကို ၅၀ တောင် ယူထားတယ်။
၇င်တွေ ဘာတွေတောင် တုန်ပြီး ကလေးတွေ ဖုန်းယူဆော့တုန်း ဘာတွေများ လုပ်လဲ မသိဘူးဆိုပီး
ဂူဂယ် လိုက်ရတယ်။ဟယ် ကိုလို လူတွေ အများကြီး ပါလား သူက ၁ထောင် တောင်တဲ့
ကွန်မန့်တွေ လိုက်ဖတ်ပြီး အရင် ဆုံး သူပြောသလို *25625 ကိုခေါ်ပြီး PRS Barring ကို Activate
လုပ်ထားပြီး နေ့ခင်း ကလေးတွေ အိပ်မှ ငါ နဲ့ ဆင်တဲ့(ကျား(တနလာင်္သမီး) နဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့)
ကြပြီပေါ့ကွာ ဆိုပြီး တေးထားလိုက်တယ်။နေ့လည် ကလေးတွေ အိပ်တော့ အားလုံး စုံအောင် တစ်ခါ
ထပ်ဖတ်ပြီးhttps://apps.facebook.com/singtel_query_multi/ မှာ သွားပြီး Feedback ပေးလိုက်
တယ်။၁၅ မီးနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။Private number နဲ့ ဆင်တဲက ကဖုန်းခေါ်လာ တယ် ။ဒါသူတို့
ဆားဗစ် မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ ဒါပေမယ့် ပထမအကြိမ်အနေနဲ့ wave လုပ်ပေးပါမယ်တဲ့။*25625 ကိုခေါ်ပြီး
PRS Barring ကို Activate လုပ်ထားပါတဲ့။လုပ်ပြီးသွားပြီ ဆိုတော့ အဲ့ဒါဆို နောက် ဒါမျိုး မကြုံရတော့
ပါဘူးတဲ့။တ်ာသေးတာပေါ့ နမို့ ဆို ဒီညတော့ အိပ်နိုင်မယ် မထင်ဘူးသီချင်းဆိုနေရမှာ.............
Posted by JuneOne at 5:16 PM 14 comments Links to this post
စောဖိုးခွား မွေးနေ့ပွဲ ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တတ်ရောက် - အဆိုတော် စောဖိုးခွါး မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပြုလုပ်တဲ့ "ချစ်ကြပါ အမုန်းများရပ်" ငြိမ်းချမ်းရး ဂီတပွဲကို မတ်လ (၁၅)ရက်နေ့က ဗိုလ်တထောင်ကမ်းနားမှာ ပြုလုပ်ခ...
လှည်းကူးတွင် မီနီဘတ်စ်ယာဉ်က ရပ်ထားသည့် ယာဉ်သုံးစီးအား ဝင်တိုက်၊ သုံးဦးဒဏ်ရာရ တစ်ဦးသေဆုံး - လှည်းကူး မတ် ၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှည်းကူး မြို့နယ်တွင် မတ် ၁၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တိုယိုတာဟိုက်အေ့ မီနီဘတ်စ် ယာဉ်က လမ်းဘေးတွင်ရပ်ထားသော ယာဉ်သုံးစီးအား ဝင...
မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ - ၁၉၈၀) - အပိုင်း (၆၀) - မောင်မောင်စိုး ● နှင်းဆီနီနီ အိပ်မက်များ (၁၉၇၅ - ၁၉၈၀) - အပိုင်း (၆၀) (မိုးမခ) မတ်လ ၁၇၊ ၂၀၁၈ *● CPB ၏ အခြားစစ်ဒေသနှင့်တပ်ဖွဲ့များ* ၁၉၇၇ ခုနှစ်ကာလပိုင်း CPB...
Xi Jinping Will Rule China For Life As Chairman Xi - (Staff article from The AP NEWS on 12 March 2018.) Chairman Xi will rule China for life. BEIJING (AP) — Xi Jinping, already China’s most powerful leader i...
"Mexican (မက္ကဆီကန်) သဘာဝအဆီကျဆေး - "*Mexican (မက္ကဆီကန်) သဘာဝအဆီကျဆေး Chia Seed (ချီယာစေ့)"* လက်တင်အမေရိကားကို စပိန်လူမျိုးတို့ မသိမ်းပိုက်ခင် အချိန်ကတည်းက Aztec နှင့် Mayan Indian (ယနေ့ မက္က...
Facebook မှာ ဖတ်ရှုရတဲ့ ရောင်စုံကာတွန်းများ (၁၄ မတ်လ ၂၀၁၈) -
OCD (သို့မဟုတ်) စိတ်စွဲလွန်ဝေဒနာ - သူ့ကိုကျွန်တော် စတွေ့တုန်းက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ အရာရာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ်။ အာသာဆန္ဒ အကြောဆွဲမှုအားလုံး၊ ခေါင်းထဲမှာ တရစပ် ထင်နေတဲ့ ပုံရိပ်ေ...
ဗီယက်နမ်စစ်ပြန်ရဟတ်ယဉ် CH-46D - 1970 ခုနှစ် Jan 31 ရက်မှာ ရဟတ်ယဉ်တပ်သား ရေမွန်မိုက်ကယ် ကလောဆန် ဂျူနီယာ တစ်ယောက် ဒီ CH-46D ရဟတ်ယဉ်ကြီးနဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဒါနမ်အနီးမှာ အပြင်းအထန် ပစ်ခတ်ခံ...
Acknowledgement - *Dear friends* * Today 15th is my school last day with I attended MPA two years, I really happy and to get many knowledge, experiences and to me...